Nahoana ny efijery namboarina no nalaza kokoa ankehitriny?
Ny fampisehoana LED miolaka dia tsy mitovy amin'ny fiaramanidina nentin-drazana nentin-drazana, afaka mifanaraka tsara amin'ny tontolon'ny fametrahana izy ireo ary mifangaro tanteraka amin'ny tontolon'ny fametrahana. Azon'izy ireo atao ny mamolavola miaraka amin'ny radian samy hafa arakaraka ny fipetrahan'ny fametrahana azy samy hafa, mifanaraka tanteraka amin'ny endrika firafitra. Damaody foana izy ireo noho ny fampisehoana namboarina matetika, noho ny habeny cambered tsara tarehy. Miovaova ihany koa izy ireo ary manana zoro maso malalaka. Noho ny efijery notarafina notarafina sy nohavaozina, ny fampiasana fitaovana kely kokoa mamoaka hazavana, ny androm-piainan'ny serivisy, mihena be ihany koa ny vidiny.
Ny fisehoan'ny LED miolaka dia azo sokajiana amin'ny karazany maro, toy ny fampisehoana cambered cabo ambony sy fampisehoana cambered cambered, fisehoana ambony cambered ary fisehoana ety ambony cambered. Ireo maodely dia be mpampiasa ho fampitaovana fifandraisana ho an'ireo orinasa mpanao fampisehoana, manampahaizana manokana momba ny fampiroboroboana, mpivarotra enta-madinika, fampirantiana, mpitantana tranom-panjakana ary manampahaizana manokana momba ny fiofanana. Ho an'ny fampiroboroboana ny marika, ny fampidirana serivisy ho an'ny vokatra sy ny fifandraisana amin'ny fampahalalana momba ny orinasa dia nitana andraikitra lehibe tamin'ny fampiroboroboana.
Ny fomba famolavolana sy fanaovana curve naseho fampisehoana dia samy hafa be arakaraka ny radiana samihafa. Zava-dehibe ny tariby rehefa manapa-kevitra ny amin'ny famolavolana ny fizotry ny famokarana isika.
1. Rehefa lava kokoa noho ny iray metatra ny radius dia azontsika atao fotsiny ny manao ny kabinetra ho lava endrika sy mitsangana, rehefa manangona azy ireo isika dia mila manitsy ny zoro eo anelanelan'ny kabinetra roa eo akaiky eo amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso ny valizy mifehy ny zoro.
2.Raha fohy ny radian dia mila noforonina mba hihodina ny kabinetra, tokony hitandrina isika rehefa manangona ireo modules.
3.Raha fohy kokoa noho ny 0,5 metatra ny radian dia mila mamolavola modely manokana isika, ireo module ireo dia tokony ho ravina mitsangana. ankoatr'izay dia mila manao ny firafitry ny vy hiolanana isika.